[Monday, June 12th, 17] :: Shir looga hadlaayo kobaca dhaqaalaha Soomaaliya oo Muqdisho ka furmay
Muqdisho (RH) Magaalada Muqdisho waxaa maanta oo Isniin ah ka furmay shir ay lee yihiin wasaaradda maaliyadda xukuumada Soomaaliya iyo wasaaradaha maaliyadda ee maamul goballeedyada, waxaana shirka looga hadlayaa sidii loo mideyn lahaa dhaqaalaha iyo canshuuraha dalka laga qaaddo.
Wasiirka maaliyadda xukuumadda fedaraalka Soomaaliya, Dr Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shirka furay ayaa sheegay in wasaaradda maaliyadda Soomaaliya iyo kuwa maamul goballeedyada ay hortaallo shaqooyin adag oo loo baahan yahay in muddo kooban lagu qabto.
Wasiirka ayaa sheegay in sidoo kale Soomaaliya looga fadhiyo in ay soo saarato dhaqaale si uga maaranto dhaqaalaha beesha caalamka ay ku taageeraan isla markaana looga faa’ideysto kheyraadka uu Alle ku maneestay dalka oo dhan.
Wasiir Beyle ayaa hoosta ka xariiqay shirkan oo socon doona muddo saddex cisho in lagu dhisi doono hannaan ay kuwadashaqeyn karaan wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha maaliyadda ee maamul goballeedyada si loo dhiso hannaan loogala socdo dhaqaalaha dhinacyadaas u soo xarooda si la mid ah wadamada fedaraalka ee dunidda ka jira.
Wasiirka waxaa kaloo uu xusay in Soomaaliya lagu lee yahay lacag deyn oo gaareysa illaa 5 bilyan oo dollar loona baahan yahay in la iska gudo waa in aan la nimaadno qorshihii aan deymahaas isaga gudi lahayn”ayuu yiri wasiirku.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in uu soo hagaagayo dhaqaalaha dalka ka soo xaroodo dekedda iyo garoonka Muqdisho, kaddib markii lala dagaallamay musuqmaasuqii ka jiray goobahaas.